Mudane Dirir ?Wefdiyo siyaasaddeed ma qaabili karno inta gurmadka masiibadu socoto? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Mudane Dirir ?Wefdiyo siyaasaddeed ma qaabili karno inta gurmadka masiibadu socoto? (Dhegeyso)
Nofeembar 14, 2013 10:57 b 0
Garoowe, November 14, 2013 – Dowladda Puntland ayaa caawa shaacisay in ay hakinayso qaabilka wufuuda kala duwan ee ka imanaya caalamka, maadama xilligan aad loogu mashquulsan yahay howlaha shaqo ee u gurmadka dadka dhibaatadu saamaysay.
Wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland ahna gudoomiyaha guddiga gurmadka masiibada Puntland, waxaa uu sheegay inay adag tahay in la qaabilo xilligan wufuud caalami ah, waxaa uu sheegay in shaqada tooska ah ee gurmadka ay adag tahay.
?Waxaan ka cudur daaranaynaa in aanan qaabili karin wefdiyo siyaasaddeed ah isla markaasna aan wakhti loo helayn, waxaa hadda lagu jiraa xili gurmad iyo dadka la caawiyo.? Ayuu yiri wasiirka qorshaynta ee Puntland isagoo sheegay inay soo dhowaynayaan dhamaan deeqaha caalamka oo idil.
Docda kale, waxaa uu sheegay inay xilligan qaabilayaan kooxdii ugu horaysay ee gurmad ah oo ka imanaya caalamka, waxaa uu carabka ku dhuftay in ay galabta baaqdeen diyaarado gurmad-sida oo ka iman lahaa Itoobiya iyo Jabuuti.
?Roobab baa weli da?aya oo cimiladu ma wanaagsana dhanka duulimaadka, taas ayaa sababtay in gurmadku baaqdo, waa deeqdii ugu horaysay oo caalami ah, waxaana filaynaa berri inay na soo gaarto.?Ayuu yiri Dirir
Wasiirka qorshaynta ee Puntland Maxamuud Caydiid, waxaa uu baaq u diray qurba-joogta oo uu ka dalbaday inay gurmadka qayb ka noqdaan, waxaa uu sheegay in Puntland qorshe u dejisay bixinta deeqaha ka imanaya gudaha iyo dibeda.
Mudane Caydiid ayaa yiri ?dhaqaalaha waxaa loo furay kaydad bankiyo kala duwan, hadii ay noqon lahayd kuwa gaar loo leeyahay ama bankiga dowladda, dadku dhaqaalaha halkaas bay ku shubayaan, taas ayaa sahlaysa in ?si wanaagsan loo maamulo meelaha lacagtu ku baxday iyo sida dadka wax lagu gaarsiiyey.?
Dhegeyso: Wasiirka qorshaynta Puntland Mudane Dirir oo saxaafadu su?aalo weydiinayso
Baahin: Khamiis, 14 Nov 2013, Caawa Iyo Daljir, Weriye Khadar Cawl Ismaaciil ~ Daljir ~ Buuhoodle
Xukuumadda Soomaaliya oo meelmarisay dib-u-hawlgelinta Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed